WARARKA AFRIKADA BARI:
SOMALITALK.COM | December 4, 2002
Bush oo Khamiista la kulmaya Moi iyo Zenawi
41 Qaxooti Suudaan ah Lagu Diley Itoobiya
Diyaaradaha Itoobiya oo Joojinaya Duulimaad yadoodii Israel
Sida ay ku sheegtay qoraal ay si rasmi ahaan ah usoo saartay shirkada diyaaradaha ee dalka Itoobiya waxay ay laashay dhamaan duulimadyadii ay ku tagi jirtay Talaabiib laga bilaaba maalinta barri ah.
Go'aankaas waxa uu ka dhashay kadib markii ay shirkadu ka xumaatay sida loola dhaqmay dulimadkii maalintii axadda ahayd oo rixladii ku socotay Talaabiib loo jeediyey Koonfurta Israa'iil oo ah garoon Ciidan, halkaasoo lagu sameeyey baaritaan dhamaan diyaarada.
Shirkada diyaaradaha Itoobiya waxa ay sheegtay socdaalkaas oo ahaa mid ganacsi in shirkadu ay kala kulantay khasaare badan, ayna u adkeysan karin in baaritaan lagu sameeyo shaqaalaha diyaarada iyo rakaabkaba.
Israa'iliyiintuna waxay ay gudoonsadeen in baaritaan lagu sameeyo dhamaan diyaaradaha soo galaya dalkooda, go'aankaas oo ka dhashay Qaraxii Mombasa kadib, qaraxaas oo sababay dhimashada 16qof.
warkan waxaan kasoo xiganay: http://aljazeera.net/news/africa/2002/12/12-4-1.htm
Madaxweynaha Maraykanka oo Khamiista La Kulmaya Madaxweynaha Kenya iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya
Madaxweynaha Jabuuti Kulankaas wuu ka baaqday Ciida awgeed
Madaxweynaha dalka Maraykanka, George W. Bush, waxa uu maalinta Khamiista la kulmi doonaa madaxweynaha dalka Kenya Daniel Arap Moi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi.
Ajandaha wadahalka ayaa lagu soo waramay in ay ugu horeeyaan la dagaalanka argagixisada iyo sidii maraykanku u fidin lahaa ka qayb qaadashada xagga militeriga ee gobolka, tan oo ka dambeysey weerarkii gantaalada ee dhowaanta lala beegsaday diyaaradii ka duuleysey Mombasa, Kenya.
Madaxweynaha Djibouti, Ismael Omar Guelleh, waa lagu casumey kulankaas in uu kala qayb qaato Moi iyo Zenawi oo guriga cad kula kulmaya Bush, laakiin Guelleh waa ka baaqday sabatoo ah waxa uu sheegay in ay ka dhigi lahayd in uu wadanka dibada kaga maq naan lahaa xiliga ciida oo mid ka mida maalmaha ugu qadarinta mudan diinta Islaamka.
Qaramada Midoobey oo Sheegtay in 41 Qaxooti Suudaan ah Lagu Diley Itoobiya:
Sida ay werisey hay'adda wararka ee Reuters, waxaa xero qaxooti oo kutaal dalka itoobiya lagu diley 41 qaxooti u dhashay dalka Suudaan. Dilkan oo dhacay talaadadii iyo arbacadii waxaa lagu soo waramay in uu ka dhashay iska hor imaad ku salaysan xagga qabiilka kooxo iska soo horjeeda.
Iska hor imaadkaasi wuxuu ka dhacay xerada qaxootiga ee Fugnido oo u dhow magaalada Gameila oo kutaal galbeedka fog ee Ethiopia, xeradaas waxaa kujira ilaa 28,700 qaxooti ah.
Sida uu sheegay afhayeen u hadlayey hay'adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga (UNHCR) waxa uu sheegay in iska hor imaadkaasi uu galaaftay 41 qof, taas oo arbacadii hal weerar lagu diley 33 qof, inta kalena iska hor imaadyo kala duwan.
Waxaa warku intaas ku daray in qayb qaxootiga ka mid ah ay kooxa iska is hor yimid ku xiriiriyeen SPLA (oo ka dagaalama Suudaan).
Isha Warka: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L03252648
Tarjumadii Maxamed Cali (SomaliTalk editor-in-Chief)